ထုတ်လွှင့်ဒီည LIVE 19.00: Derbymatch Holmes SK ကို – Kovlands IF | Holmbygden.se
အပေါ် Posted 18 မေ, 2016 အားဖြင့် Holmbygden.se
နေ့တိုက်ရိုက်၏ပွဲစဉ်! သငျသညျအောက်ခြေညာဘက်ဂီယာ၏အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိသေချာအောင်လုပ်ပါ. မည်သည့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ၏အမှု၌, တိုက်ရိုက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလင့်ထားသည်ထုတ်လွှင့်မယ့်အစားကြိုးစားကြ.
ယနေ့ည 19:00 ကစား “အယ်လ်ClásicoNordvästras” Holmes SK ကိုအကြားဂန္ဒါဘီတှေ့ဆုံနှင့်အတူ Holmes Vallen မှာ – Kovlands IF. အဆိုပါပွဲစဉ်အတွက်ကို kiosk ကနေ java နဲ့ဝက်အူချောင်းသို့မဟုတ်ဘာဂါ၏ရေနွေးငွေ့သောက်သောခွက်, ခါတိုင်းလိုအဖြစ် On-site ကိုအကောင်းဆုံးကိုခံစား.
Holmbygden.se တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပွဲစဉ်. ဒီဓမ္မvårdrabbningမှာတက်ရောက်ရန်နိုင်မဟုတျပါဘူးသောသူတို့အဘို့, ဒီ website ကိုကြည့်ရှုဖို့လည်းကောင်းသောဂိမ်းသွားပါ. ဒေသခံသတင်းထောက် Fredrik Wikholm အကြံအဖန်ပွဲကင်မရာဟာ HSK တပ်၌ကျွမ်းကျင်သူဝေဖန်သုံးသပ်ချက်များနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းနှင့်အတူပွဲစဉ်ထုတ်လွှင့်အတူလိုက်ရုံမရောက်မီ.
lineup, ပွဲစဉ်ကြေငြာခြင်းနှင့်ရလဒ်အသီးအသီးပွဲစဉ်အတွက်စာသား ဤနေရာတွင်အခမဲ့!
ဒီညရဲ့စီး (“ပါဝင်သော” အထက်): https://www.youtube.com/watch?v=CniAUdOSnXo
HSK:Youtube ကို-Channel ကိုအားဖြင့်: holmssk.se/youtube
နောက်ဆုံးဒါဘီ, တစ်ဦးမှတ်ဉာဏ်svärd Holmes Seger! နောက်ဆုံး HSK Holmes Vallen မှာ Kovland မေလတွင်လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်ခဲ့ကြိုဆို 2013 DM-Shocker အတွက်, နောကျ 3-3 အချိန်ပြည့်အတွက်ပင်နယ်တီအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွါးခဲ့ဖို့တက်သွားလေ၏. 6-4 အဖြစ်အဆုံးရလဒ်, ယင်းအထူးတန်းများ၏ရှေ့မှောက်၌တစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ထိပ်တိုက်တွေ့ပြီးနောက်.
Holmes SK ကိုအကြား Holmes Vallen မှာနောက်ဆုံးအစည်းအဝေး၏အထက်တွင်အပြည့်အဝပင်နယ်တီရိုက်ကူးကြည့်ရှုပါ – Kovlands IF.